Fialanazana - Mpanamboatra Million
Ny marika, logos ary marika serivisy naseho izay voasoratra anarana sy / na marika tsy voasoratra anarana izay tompona azy. Ny famerenana amin'ny ankapobeny na amin'ny endriny rehetra tsy misy fahazoan-dàlana an-tsoratra dia voarara. Zo rehetra voatokana.
Ny fampahalalana omena an'ity tranonkala ity dia ho an'ny tanjona ihany, noho izany, ny mpampiasa / mpitsidika dia tsy tokony handray fanapahan-kevitra mifototra aminy fotsiny. Ampirisihina mafy ny mpampiasa rehetra hitady torohevitra manam-pahaizana tsy miankina alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra misy fiantraikany amin'ny ara-bola, ara-pitondran-tena na ara-dalàna. Ny orinasa dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tsy fitoviana na tsy fahamarinana ao anatin'ny fampahalalana nomena. Ny orinasa dia mety na tsia mety ho tena mpamatsy ireo serivisy voalaza, noho izany antony izany, ny orinasa dia tompon'andraikitra amin'ny fitantanana ny serivisy mifanaraka amin'ny fifandraisana ifanarahana ihany.
The MillionMaker.com tranokala dia omena amin'ny fototra "AS IS" sy "AS AVAILABLE" tsy misy solontena na fanekena natao ary tsy misy fiantohana na inona na inona, na mazava na tsy misy dikany, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fiantohana voatanisa manana kalitao mahafa-po, fahasalamana ho an'ny tanjona manokana. tsy fanitsakitsahana, fifanarahana, fiarovana ary fahamarinana. Ny andraikitra rehetra sy ny trosa rehetra mety hitranga amin'ny fidiranao sy fampiasanao ireo tranokalanay, na noho ny tsy fitandremana, ny fanitsakitsahana adidy na ny hafa, dia esorina amin'ny fetra farany lehibe avelan'ny lalàna.
Ny votoatin'ny MillionMaker.com Ny tranokala dia natao ho an'ny fampahalalana ankapobeny fotsiny ary tsy torohevitra ara-dalàna na torohevitra matihanina. Ny fikarakarana ilaina rehetra dia natao mba hahazoana antoka fa marina sy havaozina ny fampahalalana momba ny tranokalanay, ary tsy afaka mandray andraikitra isika amin'izay mety ho vokatsoa azo avy amin'ny tsy miankina amin'ny fampiasana na fampahalalana ankapobeny toy ny voalaza etsy aloha. Ny fampiasanao ny tranokalanay rehetra dia tsy miteraka mpisolovava / mpanolo-tsaina / mpanolo-tsaina - fifandraisana amin'ny client MillionMakers.com, ary ny fampiasana toy izany dia tsy nahazo ny torohevitra ara-dalàna na matihanina hafa MillionMakers.com. Ny mpampiasa ny tranokalanay rehetra, na mpanjifa izany dia mpanjifa ao amin'ny MillionMakers.com, dia nanoro hevitra anay hifandray aminay sy / na handray torohevitra matihanina mifanaraka amin'izany alohan'ny hanolorany tena amin'ny zavatra rehetra na handray fanapahan-kevitra momba ny serivisy angatahina.
Fampidirana sy serivisy fananganana orinasa LLC
Ny serivisy Incorporation sy LLC Formation Services dia misy ny fanomanana sy ny fametrahana antontan-taratasy fananganana any amin'ny fanjakanao, miorina amin'ny fampahalalana nomenao rehefa nandidy ny serivisy ianao ary hatolotrao amin'ny raharahanao manokana. Ho an'ny fandefasana antontan-taratasy fananganana orinasa any amin'ny fanjakanao, MILLION MAKERS dia tsy hanao antoka na fikasana hiantoka fa marina, mety na feno ny fampahalalana ao amin'ny antontan-taratasy fananganana. Adidinao ihany koa ny mahazo sy mitazona ny fanekena alohan'ny hanendrena ny masoivoho voasoratra anarana / monina ho an'ny orinasanao. Ankoatr'izay, tsy tompon'andraikitra izahay amin'ny fiantohana fa vita avokoa ny fampidirana ny fanjakana na ny fananganana orinasa, ary tsy tompon'andraikitra amin'ny fanoroana hevitra na fampahatsiahivana anao izahay momba ny zavatra takiana na adidy, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny fangatahana fanjakana na federaly takiana. tatitra isan-taona, haba aloa. Ankoatr'izay, alohan'ny hampiasana ny serivisinay dia anjaranao irery ny misafidy ny Form Corporate ho an'ny orinasanao (C-Corporation, S-Corporation, LLC, fiaraha-miasa, Private Limited na voafetra).
Fanafahana ny tolotra amin'ny serivisy
Raha misy baiko ho an'ny serivisy ataontsika dia averina aorian'ny nandraisanay fandoavam-bola, dia haverina ny vola manontolo afa-tsy ny famerenam-bola $ 50.00. Izay baiko efa nopetahany ampahany dia tsy averina.
MAMPIANDRENY DIDY TSY MISY INDRINDRA. MILLION MAKERS dia orinasa mametraka antontan-taratasy sy orinasa fikarohana ihany. Ny fampahalalana nomena MillionMakers.com dia natao ho an'ny tanjona fampahalalana ankapobeny ihany. Ilay tranonkala, MillionMakers.com, dia fananan'i MM LLC tanteraka ary ampiasain'ny MM LLC. Araka ny voalaza etsy ambony, MM LLC (ao anatin'ireo tolotra omena amin'ny alàlan'ny MillionMakers.com) dia tsy firazan-dalàna, ary tsy misy mpiasa ao amin'ny MILLION MAKERS manao ho mpisolovava anao, ary na inona na inona toe-javatra dia tokony ny fampahalalana omena amin'ity tranokala ity na ny fifandraisana avy amin'ny mpiasa MILLION MAKERS dia azo raisina ho torohevitra ara-dalàna. Ankoatr'izay, io fampahalalana io dia tsy natao ary tsy tokony ho solony amin'ny torohevitra araka ny lalàna. Satria miova lalandava ny lalàna, ny fampahalalana amin'ity tranokala ity dia tsy azo antoka hoe marina, feno na ankehitriny. Torohevitra ianao raha mahita mpisolovava momba ny serivisy fifindra-monina, ny serivisy fampianarana, ny fananganana orinasa, ny marika, ny lisansa ara-barotra, ny fahazoan-dàlana ara-bola, ny serivisy trano, ny fivarotana, na raha toa ka manana fanontaniana manokana tsy voavaly amin'ity tranokala ity ianao na raha mila mari-pahaizana ambony kokoa.
Famerana ny fahavoazana. Hevitry ny risika. Fandavana ny ady.
MILLION MAKERS dia tsy manome andraikitra ny fahavoazana rehetra nateranao, anisan'izany, fa tsy voafetra amin'ny, hadisoana, tsy fatiantoka, fahaverezan'ny data, fahatarana na fandefasana, tsy fanaterana, famafana ny rakitra na e-mail, hadisoana, kilema, solosaina virus, na fanelingelenana serivisy na inona na inona, na tsy fahombiazan'ny fampitaovana, tsy fahombiazan'ny serasera, halatra, fandringanana na tsy nahazoana alalana amin'ny firaketana, programa, fampahalalana na serivisy MILLION MAKERS. MILLION MAKERS dia tsy manome andraikitra ny kalitao, ny fahamarinany ary ny maha-ara-dalàna ny data / fampahalalana natambatra amin'ny fampiasana serivisy iray. Loza mampidi-doza ny fampiasana fampahalalana nangonina tamin'ny alàlan'ny serivisy MILLION MAKERS. Tsy misy toro-hevitra am-bava na fampahalalana an-tsoratra omen'ny MILLION MAKERS, ny mpiasa ao aminy, ny mpiasa, ny mpizahatany, ny mpamatsy, na licence na ny toy izany, no tsy mamorona antoka na fahazoan-dàlana; ary tsy azonao atao ny miantehitra amin'ny fampahalalana na torohevitra tahaka izany.
Ny andraikitrao sy ny risika no azonao amin'ny fampiasana ny serivisy MILLION MAKERS. MILLION MAKERS dia tsy manome antoka ny maha-marina na feno ny fampahalalana an'izany momba ny serivisy. Ny serivisy MILLION MERSION dia omena amin'ny alàlan'ny "toy izao" ary "azo alaina". Adidinao ny manombatombana ny fahitsiana, ny fahafenoana ary ny mahasoa ny fampahalalana rehetra sy ny valim-pikarohana atolotra ao amin'ny tranokalanay na nampita am-bava ny mpiasa MILLION MAKERS.
Tsy misy fanehoana na antoka, omena na ampahafantarina, omena momba ny ara-dalàna na vokatra hafa ateraky ny fampiasana ny serivisintsika. Ny adidy amin'ny MILLION MAKERS amin'ny fangatahana vokatry ny fampiasana ny serivisintsika dia voafetra ihany amin'ny vola tena naloan'ny MILLION MAKERS ho an'ny fampiasana an'io. Ny fitakiana ara-dalàna rehetra ateraky ny fampiasana ny serivisintsika dia hotsongaina ao amin'ny tribonalin'i Belize
Raha toa ka tsy voahaja ny fepetra rehetra an'ity fitsipi-pifehezana ity, ny fepetra toy izany dia voafetra na esorina amin'ny farafaharatsiny ilaina indrindra ka io fifanarahana io dia hitohy amin'ny fomba feno sy amin'ny asany rehetra.